Imaatinka Labaad ee Masiixa, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Sidii uu ballan qaaday, Ciise Masiix wuxuu ku soo noqon doonaa dhulka inuu xukumo oo xukumo quruumaha ku dhex jira boqortooyada Ilaah. Imaatinkiisa labaad ee awooda iyo ammaanta ayaa la arki doonaa. Dhacdadani waxay bilaabaysaa sarakicidda iyo abaalmarinta quduusiinta. (Yooxanaa 14,3; Muujintii 1,7; Matayos 24,30; 1 Tesaloniika 4,15:17 - 22,12; Muujintii)
Masiixu miyuu soo laaban doonaa?
Maxaad u malaynaysaa inay tahay dhacdada ugu weyn ee ka dhici karta masraxa adduunka? Dagaal kale oo adduunka ah? Soo helitaanka daawo loogu talagalay cudur daran? Nabadda adduunka, mar iyo dhammaan? Ama la xiriir sirdoonka shisheeyaha ka baxsan? Malaayiin Masiixiyiin ah, jawaabta su'aashani waa mid fudud: dhacdada ugu weyn ee weligeed dhici karta waa imaatinka labaad ee Ciise Masiix.
Farriinta udub dhexaadka u ah Kitaabka Quduuska ah
Sheekada oo dhan ee Baybalka ayaa diiradda saareysa imaatinka Ciise Masiix ee Badbaadiye iyo Boqor. Beer Ceeden, waaliddiinteenii ugu horreeyay waxay jabiyeen xiriirkoodii ay la lahaayeen Ilaah denbiga. Laakiin Ilaah wuxuu sii saadaaliyay imaatinka Bixiye kaasoo bogsiin doona nasashadan ruuxiga ah. Abeesadii ku qalday Aadan iyo Xaawa inay dembaabaan, Ilaah wuxuu yidhi: - Oo colaad baan dhexdiil u dhigi doonaa adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankooda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibbahaad isaga qaban doontaa » (Bilowgii 1:3,15).
Tani waa wax sii sheegidda Kitaabka Quduuska ah ee ugu horreeya ee Badbaadiye oo burburin doona awoodda dembiga ee dembiga iyo dhimashada ay ku biirayaan dadka ("Waa inuu madaxaaga burburiyo"). Sidee? Iyada oo loo marayo geerida allabari ee badbaadiyaha ("Waxaad ku xasilin doontaa ciribta"). Ciise ayaa tan gaadhay markii ugu horraysay. Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu u aqoonsaday inuu yahay "Wanka Ilaah ee dembiga u qaada dunida" (Yooxanaa 1,29).
Baybalku wuxuu daaha ka qaadayaa muhiimadda udub dhexaadka u ah Eebbe markii Masiixu yimid. Baybalku wuxuu kaloo daaha ka qaadayaa inuu Ciise imanayo nolosha mu'miniinta. Oo Kitaabka Quduuska ah wuxuu kaloo leeyahay hubaal in uu mar kale soo noqon doono, isagoo muuqan iyo xoog leh. Runtii, Ciise wuxuu ku yimid seddex qaab oo kala duwan:
Ciise ayaa horay u yimid
Aadanahayadu waxaynu u baahan nahay badbaadada Eebbe - badbaadadiisa - maxaa yeelay Aadan iyo Xaawo way dembaabeen oo adduunka u keeneen dhimasho. Ciisena wuxuu dhammaystiray badbaadadan isagoo ku dhinanaya meesheena. Bawlos wuxuu ku qoray Kolosay 1,19: 20: "Maxaa yeelay, way ka farxisay Ilaah in wax walba oo isaga dhex jooga, isaga wax walbana isaga kula heshiiya, ha ahaadeen dhulka ama jannada, isagoo nabda kula nabda dhiiggiisa. Isgoys. " Ciise wuu bogsiiyay nasasho wixii markii hore ka dhacay Beer Ceeden. Isaga oo naftiisa huraya, bini-aadamka waa lagula heshiin karaa Ilaah.
Waxsii sheegyada Axdiga Hore waxay tixraacaan Boqortooyada Ilaah mustaqbalka. Laakiin Axdiga Cusubi wuxuu ka bilaabmay Ciise oo ku wacdiyey warka wanaagsan ee Ilaah: "Wakhtigii waa yimid ... oo boqortooyadii Ilaah waa timid," ayuu yidhi (Mark 1,14-15). Ciisena, boqorka boqortooyada, wuxuu dhex socday dadka! Ciisena wuxuu "allabari u bixiyey dembiyada" (Cibraaniyada 10,12). Waa inaanan waligeen la iloobin muhiimadda ay leedahay abuurista Ciise, noloshiisa iyo shaqadiisa qiyaastii 2000 sano ka hor.
Ciise waa yimid. Intaa waxaa dheer - Ciise ayaa imanaya hadda
Waxaa jira war wanaagsan oo loogu talagalay dadka rumeysan Masiixa: «Idinkuna waad ku dhimateen xadgudubyadiinnii iyo dembiyadiinnii, kuwaas oo aad ugu noolaan jirteen nolosha adduunkan… Laakiin Ilaaha naxariista leh ayaa leh jacayl aad u weyn kan uu ina jeclaa oo innaguna dembiyadeenii ku dhintay, oo la noolaa Masiixa, nimco baad ku badbaaddeen. (Efesos 2,1-2; 4-5).
Ilaah hadda wuxuu ruuxi ahaan innaga inagu soo kiciyey Masiix! Nimcadiisa darteed, “ayuu innaga sara kiciyey oo jannada ina geliyey xagga Ciise Masiix, si wakhtiyada soo socda uu muujiyo hodantinimada nimcadiisa ee nimcadiisa xagga wanaaggiisa uu inoogu qabo xagga Ciise Masiix." (Aayadaha 6-7). Qaybtani waxay qeexeysaa xaaladdeena hadda jirta sida tan raacsan ee Ciise Masiix!
Ilaah dib buu noogu soo nooleeyay "oo naxariistiisa weyn ka dib rajada rajada ah ee sarakicidda Ciise Masiix ee kuwii dhintay ka dhintay, oo ah dhaxal aan dhiman karin oo aan dhammaanayn oo jannada laydiinku kaydiyey" (1 Butros 1,3: 4). Ciise wuxuu inagu dhex jiraa hadda (Galatiya 2,20). Waxaan ku dhalanay ruux ahaan waxaanan arki karnaa Boqortooyada Ilaah (Yooxanaa 3,3).
Markii la weydiiyay goorta ay boqortooyada Ilaah imaanayso, Ciise wuxuu ku jawaabay: «Boqortooyada Ilaah uma timaado hab sidan loo arki karo; Midkoodna ma odhan doono, Waa tan! ama: waa jiraa! Maxaa yeelay, bal eeg, boqortooyadii Ilaah waa idinku dhex jirtaa. (Luukos 17,20-21). Ciise wuxuu ku dhex jiray Farrisiinta, laakiin wuxuu ku nool yahay Masiixiyiinta. Ciise Masiix wuxuu keenay boqortooyadii Eebbe shaqsiisa.
Sidan oo kale ayuu Ciise noogu nool yahay hadda, isagu wuxuu soo bandhigayaa Boqortooyada. Imaatinka Ciise inuu ku noolaado innaga ayaa muujinaya muujinta kama dambaysta ah ee boqortooyadii Ilaah dhulka markii Ciise yimid markii labaad.
Laakiin muxuu Ciise noogu nool yahay? Waxaan ogaaneynaa: «nimcadiina waxaad ku badbaaddeen rumaysad, mana aha idinka; Maxaa yeelay, innagu waxaynu nahay shaqadiisii, oo lagu dhex abuuray Ciise Masiix xagga camalka wanaagsan oo Ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku soconno. (Efesos 2,8: 10). Ilaah wuxuu ku badbaadiyey nimco, ee ma aha dadaalkeena. Laakiin inkasta oo aan lagu badbaadin karno shaqooyinka, Ciise wuxuu inagu dhex jiraa si aan hadda u qaban karno shaqooyin wanaagsan oo aan markaa u ammaano Ilaah.
Ciise waa yimid. Ciise waa imanayaa. Iyo - Ciise wuu soo laaban doonaa
Sarakiciddii Ciise ka dib markay xertiisii ​​arkeen markuu kacay, laba malaa'igood baa weydiiyey su’aasha:
«Maxaad taagan tahay adiga oo eegaya cirka? Ciisahan samada loo qaaday adiga ayaa soo laaban doona sidaad u aragtay isagoo samada u socdaa (Falimaha Rasuullada 1,11). Haa, Ciise mar kale wuu soo socdaa.
Markuu ugu horreeyay, Ciise wuxuu ka tagay waxoogaa saadaalin ah oo ku saabsan Masiixa oo aan buuxin. Taasi waxay ahayd hal sabab oo Yuhuuddu u diiday isaga. Waxay u arkeen Masiixa inuu yahay geesi qaran oo ka xorayn doona xukunka Rooma.
Laakiin Masiixa waa inuu marka hore u dhinto bini-aadamka oo dhan. Kaliya dambe ayaa Masiixu ku soo noqon doonaa sidii boqorkii guulaystay oo keliya ma aha inuu reer binu Israa'iil kor u qaado, laakiinse wuxuu ka dhigaa boqortooyooyinka adduunka oo dhan boqortooyooyinkiisa. Oo tii toddobaadna waxay afuujisay buunkiisii; oo waxaa samada ka yeedhay codad waaweyn, oo waxay yidhaahdeen, Waddooyinka dunidan Rabbigeenna iyo Masiixiisuba way noqdeen, oo isna boqor buu ahaan doonaa weligiis iyo weligiis. (Muujintii 11,15).
Ciise wuxuu yidhi. «Oo markaan u tago inaan kuu diyaariyo goobta, waxaan rabaa inaan soo noqdo oo aan ku qaato si aad u joogto meesha aan joogo» (Yooxanaa 14,23).
Wax sii sheegidda Ciise ee Buur Saytuun (Matayos 24,1: 25.46) wuxuu ka hadlay xertii su'aalaha iyo walaacyada ku saabsan dhamaadka da'da. Goor dambe, rasuul Bawlos wuxuu kaniisadda u qoray sida "Rabbiga qudhiisu u yimaado markii amarka la dhawaaqo, marka codkii malaa'igaha Ilaah iyo buunka Ilaah laga soo dejiyo jannada, oo kuwii ugu horreeyay ee Masiixa ku dhintay Masiixa la soo sara kicin doono" (2 Tesaloniika 4,16). Imaatinka labaad ee Ciise, wuxuu sara kicin doonaa kuwii dhintay isagoo xaq ah oo aan dhiman karin oo u beddeli doona kuwa rumaysta ee weli nool oo aan dhiman karin, oo isagay kula kulmi doonaan hawada (Aayadaha 16-17; 1 corinthians 15,51: 54).
Qarniyo badan, qiyaasaha ku saabsan imaatinka labaad ee Masiixa wuxuu dhaliyay khilaafyo kala duwan - iyo niyad jabyo lama taaban karo markii duruufaha kaladuwan ee saadaaliyayaashu cadeeyeen inay khaldan yihiin. Isu-darka dulsaarka goorta Ciise soo noqon doono wuxuu naga mashquulin karaa udub dhexaadka injiilka - shaqada madax furashada ee Ciise, dhammaan dadka, lagu dhammaystiray noloshiisa, dhimashadiisa, sarakicistiisa, iyo shaqada madax furashada joogtada ah ee wadaadka sare ee jannada.
Waxaan ku qabsan karnaa qiyaasaha sheegida ee ah inaan ku guuldareysto inaan fulinno doorka sharciga ah ee Masiixiyiinta sida nalalka adduunka annagoo muujineyna nolosha jacaylka, naxariista ee Masiixiyiinta iyo inaan Ilaah ku ammaano anagoo u adeegna dadka kale.
"Haddii qof xiisaha uu u leeyahay ku dhawaaqista kitaabiga ah ee waxyaalaha ugu dambeeya iyo kan labaad ee soo socdaa waxaay u gudubtaa qaabeyn khiyaamo ah oo dhacdooyinka mustaqbalka si hufan looga leexiyay oo ka fog nuxurka iyo ruuxa hadalada nebiyada ee Ciise, faallooyinka cusub ee Kitaabka Quduuska ah ee Caalamiga ah ayaa sheegaya in Luukos injiilkiisa »bogga 544.
Haddii aysan suurtagal ahayn in la ogaado goorta Masiixu soo noqon doono (oo markaa aan muhiim ahayn marka la barbar dhigo waxa Kitaabka Quduuska ahi run ahaantii leeyahay) maxay tahay inaan xoogga saarno tamarteenna? Waa inaan diirada saarna inaan diyaar u nahay Ciise inuu yimaado markasta oo ay dhacdo!
"Taasi waa sababta aad sidoo kale diyaar u tahay!" ayaa yidhi, "waayo, Wiilka Aadanahu wuxuu imanayaa saacad aadan u jeedin" (Matayos 24,44). “Laakiin ku alla kii adkaysta ilaa ugu dambaysta, kaasaa badbaadi doona” (Matayos 10,22). Waa inaan diyaar u nahay isaga si uu nolosheenna u soo galo oo uu nolosheenna u hoggaamiyo hadda.
Ahmiyada Kitaabka Quduuska ah
Kitaabka oo dhan ayaa ku saabsan imaatinka Ciise Masiix. Masiixiyiin ahaan, nolosheenu sidoo kale waa inay ahaataa mid ku saabsan imaatinkiisa. Ciise waa yimid. Hadda waxay ku timaadaa gudaha Ruuxa Quduuska ah. Markaasaa Ciise soo laaban doonaa. Ciise wuxuu ku iman doonaa xoog iyo sharaf "inuu beddelo jidhkeenna micnihiisu tahay inuu noqdo jidhkiisa ammaanta leh" (Filiboy 3,21). Markaas «abuurku sidoo kale wuxuu ka xor u noqon doonaa addoonsiga kaamilnimada iyo xorriyadda cajiibka ah ee carruurta Ilaah» (Rooma 8,21).
Haa, dhaqso ayaan u imanayaa, ayuu yidhi Badbaadiyeheenna. Anigoo ah rumaystayaasha iyo xerta Masiixa, kulligeen waxaan ku jawaabi karnaa hal cod: "Aamiin, haa, kaalay Rabbi Ciise" (Muujintii 22,20)!